संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी! || राजनीति समाचार
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउ...
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी!
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको हो। त्यस्तै, कर्मचारीहरुको तलब समेत रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक साउन ३ गते राख्दै विश्वासको मत लिएको थियो भने सोही दिन बजेट सम्बन्धी अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। साउन ३ गते पेश भएको विधेयकहरु भदौ ३० गतेसम्म पारित हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशन केही दिन बेठक राख्दै साउन ३२ गते अन्त्य गर्‍यो।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो। एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदहरुलाई कारबाहीको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्ययन गर्ने भन्दै कुनै कारबाही नगरेपछि एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो। सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा दल विभाजन हुनसक्ने अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले सनाखत गराउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको मान्यता दिएको थियो। यस्तै, जनता समाजवादीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका थिए। यी दुई पार्टीले दलको मान्यता पाएपछि सरकारले भदौ २३ गते संसद्‌को दोस्रो अधिवेशन सुरु गरेको थियो।
भदौ १९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन बोलाएकी थिइन्। दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा एमालेले गैरसांसदहरुलाई प्रवेश गराएको, सभामुख सापकोटाको भूमिका गलत भएको र आफूले कारबाही गरेका सांसदहरु सहभागी हुन नसक्ने भन्दै अवरोध थाल्यो। मंगलबार पाँचौ बैठक बस्दासम्म एमालेले अवरोध गरिरहेको थियो।